ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၂ နား နီးလာပြီ။
လူသတ်မှု လူသေ မှု ၊ ရိုက်နှက်မှု၊ နှိပ်စက်မှု ဘာ နာမည်ပဲတပ်တပ်၊ အချင်းချင်းကြားမှာ သဘောထား စစ်တမ်းကောက်နေ တာ၊သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ် မဆိုင်တာတွေကို ကြေငြာနေခြင်းဟာ-- အရေးမကြီးတဲ.သာမညတွေ တွေ ကို တမင်လိုင်းတင် တမင် လုပ်ပြထားပြီး အရေးပါတဲ. လမ်းကြောင်းကိုဖျောက်တဲ. သဘောပါပဲ။
လူသတ်မှု လူသေမှု တွေမှာ တလောကလုံး တရပ်ကွက်လုံးက ဒီအမှု ဟာ လူသတ်မှု သို.မဟုတ် လူသေမှုသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ. အားလုံးတူညီတဲ. သဘောထားထွက်မှ ဖြေရှင်းလို.ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို တရားစီရင်ရေး ပိုင်းက ဆုံးဖြတ်ရမှာ သက်သက်ပါ။
စပိုင်ဖြစ်ခြင်း၊မဖြစ်ခြင်းမှာ မိမိ လိပ်ပြာ မိမိ မလုံတဲ. သူတွေက တရားရေးလမ်းကြောင်းကို ရှောင်တယ်။ လူထု သဘောထားကောက်ခံတာတို.၊ အေဘီ၏ဖြောင်.ချက်ဝင်ခံချက်ယူနေတယ်လို.၊ ဒေါက်တာနိုင်အောင်တို. စာရွက်တွေဖွက်ထားလို. လိုက်ရှာနေတယ်လို.၊ ပြီးတော.× ×ရန်ကုန်နဲ. မန်း မပတွေ ညီညွတ်ရေး က ပို အရေးကြီး တယ်လို.၊ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်ဖို.လိုတယ် လို.၊ ပြည်တွင်းမှာ ပီအာများများထည်.ရမှာတို.၊ လူက မသေသေးပဲ စောစောစီးစီးထွက်တဲ. ဘိုင်အိုဂရာဖီ လုပ်ကြံ ဇတ်လမ်း ကိုယ်ကပြော သူများကရေး လုပ်နေတာတို.၊ ဂျပန်ကရုပ်ရှင်အဖွဲ.တွေ နဲ. ပူးပေါင်း မပ ဇတ်လမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာတို.၊
ခုတော. အောင်မင်း ငပေါက မြန်မာဖြစ် မာတာဟာရီ လေ ဟပ်ပြီး၊ မလှသောကကြိုးနဲ. အတိုင်အဖေါက်ညီနေကြတယ်။ ပလေးနေတဲ.သူတွေက တော. ကိုယ်စောင်.နတ်နှင်. မတိုင်ပင်ပဲ၊ ရှုတ်ရှုတ်ထွေးထွေး တွေ ဆက်ပလေးနေကြတာမြင်တယ်။ တကယ် ရင်တွင်းဒဏ်ရာ ရခဲ. တဲ. သူစစ်မှန် ရင် ဒီလို မျိုး အလုပ်တွေမလုပ်ပါ။
မြောက်ပိုင်း ပြန်အများစုကတော. တကယ်သနားဖို.ကောင်းပါတယ်။ သို.သော်- မင်းတို.ထဲမှာ ပုတ်နေတဲ. ငခုံးမ တကောင် ရှိတယ်။ အဲဒီ. ငါး ကလည်း အမှု မှန်မပေါ်စေချင်ဘူး။ မဲဆောက်က အေဘီကို တကယ်ဖျက်ဆီးခဲ.တဲ. ဆရာကြီး လင်မယား ကတော. ဘယ်လိုလုပ် သဘောထားပေးပါ.မလဲ။ သူတို.ကို အောင် မင်း က ကာ ပေးတယ်။ အောင်မင်း က မာတာ ဟာ ရီ ကို ကာပေးတယ်။
ပရိတ်သတ်ကို တချိန်မှာ အမောပြေစေမှာ အမှုပဲ။
ခုတော.-အမှုက မဖြစ်တဲ. အပြင် ခု- ဟိုလင်မယားဖွက်ထားတဲ. စာ ရွက်တွေ ရှာပုံတော် ဖွင်.ကြဦးမယ်တဲ.။ မာတာဟာရီ ကို ဂိုက်လိုင်းချပေးနေတဲ.သူတွေ ရှိနေလို.၊ အဆန်းအပြားတွေ မပါပဲ ရှုတ်နေသူတွေအတွက် နောက် တချက် အသက်ရှု ချာင်သွားပြန်ပြီ။
သို.သော်- ကြာကြာ ခံမယ်လို.တော. မထင်ပါ။ သံပတ်နဲ.လည်နေတဲ. စက်ဟောင်းစက်ညံ.တလုံး ဟာ သံပတ်ပြေရင် သူ.ဖာသာသူ ရပ်သွားပါတယ်။ ဒါ.ကြောင်. လူတွေ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်ကြတာ အရေးမကြီးပါ။
နည်းမှားနေတယ်။ denounce ဒီနောင်.စ်ပဲ ၀ါသနာအရ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်နေကြတာလား။ အဲတာ နည်းမှားနေတယ်။ ပစ်မှတ် မထိပဲ တမင် လွဲ ပစ်နေကြတယ်။
ပြီးတော.- တရားရေးလမ်းကြောင်း မှာ --နောက်ကြောင်း မရှင်း၊ စင်းလုံးမချောသူတဦး၏ လှိမ်.လုံးတွေနဲ. ဆက်သွားနေတော.၊ နည်းမှား နေတဲ. လမ်းကြောင်းမှာ ပြင်ပေးတဲ.သူ မရှိဘူး။ လမ်းကြောင်းမှန်အောင် ပြင်ပေးသောသူများကိုလည်း ကြီးစွာ ရန်သူ စွဲမှတ်ယူပြီး၊ ညစ်ပတ်လာကြတယ်။
ဒီတော.- စစ်အစိုးရအကြိုက်တွေချည်းဖြစ်လာနေတယ်။ ဒီ ဂွင်ကိုပဲ လိုချင်တဲ.သူတွေက ဆက်ပလေးကြပါလိမ်.မယ်။ ဆရာ. ဆရာကြီးတွေက တော. မာတာဟာရီကို ကာပေးရင်း၊ လူဆူပွဲတွေကိုပဲ ထပ်မံ လက်ခမောင်းခတ်အားပေး ကြလိမ်.မယ်။
ခင်ချိုဦးရောက်ရာ အရပ်က ကူလှည်.ပါ။
လူလိမ်တွေ များသထက်များလာပြီ။ သူ တကယ် ရင်တွင်းဒဏ်ရာ ရခဲ. တဲ. သူစစ်မှန် ခဲ.ရင်၊ သူ မင်း သူငယ်ချင်းအစစ်ဖြစ်ရင် ဒီလို မျိုး အလုပ်တွေ သူ လုပ်မှာ မဟုတ်ပါ။ သူဘယ်သူလည်း။
မင်းသွားခြောက်ရမဲ.သူတွေ-----နအထက၊ သန်းထွန်းစိုး၊ ဒေါက်တာနိုင်အောင်။ လှမောင်ရွှေ၊ ညိုအုန်းမြင်.၊ အောင်မင်း။ သူတို. ဘီယာ စု သောက်တဲ. အချိန် မင်း သွားခြောက်ပါ။ ပြီးတော.--၊ တပုဒ် ၂ သိန်း။ ၃ သိန်း အပေါစား စာရေးစားသူ ကို လည်း မင်း သွားခြောက်ပါ။
ဘကြီး မှိုင်း Denounce only. Correct .
Aye Aye Soe Win သူရဲ နဲ. မိတ်ဆွေ ဖြစ်ချင်တယ်။ ပုံပြင်တွေ ဇတ်တော်တွေမှာ၊ သူရဲတွေ တစ္ဆေတွေက မလိမ်ဘူး။ -
Chan Linn မှန်တာပေါ့ မလိမ့်တပတ်နဲ့ကြိုးဆွဲရာက ချင်နေရင် အရင်ထဲက မကြွေးကြော်နဲ့ ခုတော့ အစရှာမရအောင် ဘေးတီးပေးနေတယ်
May Shein very good story please keep posting stories like this. i read your stories all the time.
Aye Aye Soe Win နေကောင်းပါလား။
Ko Ko Kyaing, Chan Linn, Thet Zaw and3others like this.
Aye Thu ဒါဘယ်သူ့ပုံလဲဟင်
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး · 11 mutual friends
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး သိပ်နောက်တဲ့ လူဒွေ... စာထဲမှာ ရေးထားတယ်လေ... "မာတာဟာရီ"ဆိုလားပဲ...
ABSDF သမိုင်း ABSDFရဲဘော်ဟောင်း ကြည့်ခွင့်မရှိ
သို့နိုင်ငံတကာမှာ နေထိုင်ကြသော ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ အာဏာရှင်စစ်အစိုးရကို အသက်ပေးပြီး ဖြုတ်ချမယ်ဆိုတဲ့ သံမဏိစိတ်ဓါတ်တွေနဲ့၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းအပြီး လက်နက်ကိုင်နယ်မြေအသီးသီးမှာ စုစည်းခဲ့ကြတယ် ။ အနာဂါတ်မြန်မာပြည်အတွက် ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးခဲ့ကြတယ် ။ ၁၉၆၂ေ...
By: Htay Tint
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး ဘာလို့ ကြည့်လို့မရလဲ သိလား???
အဲ့မှတ်တမ်းတွေထဲမှာ မြောက်ပိုင်း သတ်ဖြတ်မှုမှတ်တမ်းများ မပါပါဘူး... အဘညွန့်ပြောသလို ဇရပ်ပေါ်မှာ ဒဒေါင်းဇားနဲ့ အနှုမနဲ့ ကစားရာက စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေပဲ ပါမပေါ့ဗျာ... တကယ်သာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ များရှိနေရင် သတ်ဖြတ်သူတွေဘက်ကသာ မှန်နေရင် ကျနော့်တောင် အခုသံတိုင်နောက်မှာ အကိုတို့ ထောင်ဝင်စာလာတွေ့နေရလောက်ပြီ... အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ အော်ရေးနေတဲ့သူတွေကို ကြည့်လိုက် မြောက်ပိုင်းပြန်တွေ ရေးသမျှနောက်ကို လိုက်ရေးနေရလောက်တဲ့အထိ ဘာမှတ်တမ်းမှတ်ရာမှ မရှိလို့ သနားစရာ အဖြစ်ဗျာ... မြောက်ပိုင်း မှတ်တမ်းတွေက ၁၉၉၄ကေအိုင်အေ အလင်းဝင်ကတည်းက မိုးစိုလို့ ပြဲကုန်ပြီ...
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 8:28 PM
Labels: ဓါတ်ပုံဖိုင်, မအေးအေးစိုးဝင်း